Ywar Thar Lay (YTU): ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ ကျနော့ရင်ထဲက ပန်းနှင်းဆီ
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 9:41 PM
ပတ်ပတ်စက်စက်ကြီးကို Tag တာပါလားဟေ့...။
ဘယ်သူ ဆက်tag ရမှန်းတောင်သိတော့ဘူး
လူ ၃၀ တောင်တဂ်တာ...
“ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ” နဲ့ စဖွင့်လိုက်တော့ စဖတ်ကထဲက လွင့်ကနဲပါသွားလိုက်တာ... ငယ်ရွယ်နုနယ်တဲ့ အချစ်တစ်ခုရဲ့ နူးညံ့လတ်ဆတ်မှုရနံ့နဲ့ နှင်းဆီရနံ့ရောနေတဲ့ ရနံ့တစ်ခုကို စာဖတ်သူ ရလာတဲ့အထိ ရေးနိုင်ပါတယ် အစ်ကိုရွာသားရေ...
အဆင်တန်ဆာတွေ အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ အချစ်တွေကိုချည်း မကြာခဏမြင်မြင်နေရတဲ့ ကာလကြီးမှာ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရတာ လေကောင်းလေသန့်လေး ရှုလိုက်ရသလိုပါပဲ...
ကောင်မလေးက နှင်းဆီအနီလေးဆိုရင် ကောင်လေးရင်ထဲမှာ ပွင့်ခဲ့တဲ့ မေတ္တာပန်းကတော့ နှင်းဆီအဖြူလေးလို့ပဲ တင်စားလိုက်ချင်တယ်...
စဖတ်ထဲက မြောသွားတယ် တကယ်ပါ .... နုနယ်လှပတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဟန် ကလဲ အထင်းသား..........ဖတ်လို့တော်တော်ကောင်းတယ်... ဆူးလေးတွေ ကာရံထားတဲ့ ပန်းနှင်းဆီ... ကိုရွာသား ကိုမြင်ရင်လဲ မြင်ခဲ့မှာပါလေ...။
အခုတောင် ၃၀ ဖြစ်နေပြီ။ ဘာလဲ အိမ်ထောင်သက် ၃၀ ဖြစ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်လား။ ဘလော့ရေးနေတဲ့ ရှိသမျှ လူ အကုန် Tag လိုက်ပါတော့လေ။
ဘယ်ကတည်းက ရင်ထဲအောင်းထားလည်း မသိဘူး ...မိန်းကလေးရဲ့ ပုံဟန် ဆိုထင်းနေတာပဲ ..
ဟဲဟဲ..ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူး.တဂ်တဲ့အထဲကိုယ်ပါ ပါသွားလို့ ရက်စက်တော့မှာလားလို့ပြောလိုက်တာ...သီချင်းလေးသတိရလို့ဆက်ဆိုသွားတယ်....
နည်းနည်းတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးနော်...ကြာမယ်နော်..ဘယ်တစ်ယောက်လဲပြန်စဥ်းစားချင်လို့ :P
"ရွှေနှင်းဆီ ငုံကလေးနှယ် နှုတ်ခမ်းတော်စူလွန်းတယ်...
မနေနိုင်လို့ နဲနဲလေး ပြင်ပေးသွားတယ်နော်...
ဒီ Tag ကတော့ ရေးဖို့ နဲနဲခက်နေတယ်...
လိမ္မာသား အိမ်ထောင်သည်တွေကျ မပါဘူးတော့...နို့မို့ဆို ပြသနာဖြစ်ကုန် ဒုက္ခနော်
ဒါပေမယ့်ရည်းစားရှိပြီးသားလူတွေလဲ စိုးရိမ်ရတယ်..သတင်းအမှန်ရဖို့က ခက်ပြီလေ....သူ့လက်ရှိသာပထမပန်းနှင်းဆီပါလို့ရန်အေးရင်ပြီးရော ပြောလိုက်ရင်....သွားပြီဆရာ...
ဟားဟား ကိုသီဟလည်းပါတာကိုး ပြောင်ပြောင်တို့က တော့ ရှမ်းလွန်းပြာလွန်းတယ်..ပျာတာလုပ်စားဖို့ပဲကောင်းတော့တယ်
အင်း လှလိုက်ပလိုက်တာ ရေးထားတာ ကျနော်တော့ ဒုက္ခပဲ ဟဟ .... ရေးမယ် ဗျာ ကိုရွာသား .... မိတ်ဆွေဖြစ် အထိမ်းအမှတ်ပေ့ါ ကျွန်တော့ တတိယမြောက်တက်ဂ်ပို့ စ့်ဖြစ်မယ် ဗျ ...... ခုလို ကျွန်တော့်လို လူသစ်ကို ခင်ခင် မင် ကြိုဆိုတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ကိုရွာသားလို တော့ နုရွလှပ နေအောင် ရေးနိုင်မယ် မထင်ဘူးဗျို့ ..... တွေးလိုက်ပါဦး မယ် အမြန်ဆုံးရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် ဗျား :D
ကိုရွာသားရဲ့ ချစ်ပြုံးနှင်းဆီကို လာရောက် နားဆင်သွားပါတယ်..။
အမယ်လေးနော်..သူလည်း နာ့လိုပဲ လင့်ခ်တွေ တော်တော်ထည့်လိုက်ရမယ် ထင်ရဲ့..း))
၀ါးး အိပ်ချင်ပြီ ..မနက်ဖြန်မှ လာဖတ်တော့မယ်နော်.
ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး လန့်စ်စ်စ်. :D
မဟုတ်တာတွေဖော်ရရင် ဦးဥာဏ်အိမ်ပေါ်ကနေ နှင်ချလိမ့်မယ်နော်.. ကိုယ့်အစ်မကိုကြည့်ရက်သလား။း)
လူကြီးကို ဘာတွေလာရေးခိုင်းနေတာတုန်း၊ ခက်ပြီ။
စာကို စာလိုတော့ရေးချင်ပါသေးတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်လိုက်ပါအုံးမယ်နော်။
ခွိခွိ.. တီဝါတို့တော့ ကံထူးတာပေပဲ.. :P
တို့ ဘာပန်းမှ မကြိုက်ပါဘူးးး အဲ့ဒီတော့ ဒီတဂ်ပို့စ်ကို ရေးဖို့ ချင်းချားပါဦးမယ်ချင့်( အမှန်က ရေးစရာကို မရှိတာပါ)
ှပန်းနှင်းဆီရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုတော့ ကြိုက်သွားပြီဗျို့...၊
ပန်းတွေကို အဲဒီလို bokeh နဲ့မြင်တိုင်း ပိုလှတယ်လို့ ခံစားရတယ်ဗျ၊ ဒီ blur ကတော့ တော်တော့လှတယ်။
အစုလိုက် အပြုံလိုက်ကို Tag လိုက်တာပါလား... ရွာသားရယ်...
သည်Tag က သိပ်မလွယ်ပါလား...
ချစ်ပြုံးတွေရော ရင်ဘတ်တွေရော နှင်းဆီတွေရော ဆိုတော့ ဒါ ဂျောက်ချတာပဲ...း)
သူ့နှင်းဆီရောဂါအတော်ဆိုးနေပါလား။ ဒီနေ့ပဲ နှစ်ပင်ထပ်ဝယ်ခဲ့တယ်။
အဖြူလေးတစ်ပင်ရယ်.. မိတ်ကပ်ရောင်အပွင့်မှာ အနီရောင်ရောင်အနားသပ်နဲ့တစ်ပင်ရယ်။ လှတယ်တော့..သိလား။
နှင်းဆီ နှင်းဆီ နှင်းဆီး)
အကိုရဲ့ နေရာကနေ နှင်းဆီကို ခံစားကြည့်ပါတယ်း)
မတဂ်တော့လည်း မတဂ်ဘူး။ တဂ်ပြန်တော့လည်း အယောက် ၃၀ တဲ့။ အဟေဟေ့. ခဏစောင့်။ မန်နေဂျာလစ်တုန်း ဆွဲလိုက်ဦးမယ်။ :P
ခက်တာက ဆင်ဆာမလွတ်ဘူးဗျ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။
ချစ်ပြုံးနှင်းဆီ သီချင်းလေးနဲ့ စပြီး နုလှတဲ့အရေးအသား ကြောင့် ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ဒီအတိုင်းလေးပဲ လှည့်ပြန်သွားပြီကွယ်
ပြာဂျီးက လာမေးသွားတယ်။ ရီးစားဦးအကြောင်း ရေးခိုင်းတာလား၊ ပန်းအကြောင်းရေးခိုင်းတာလားတဲ့။
ပန်းနှင်းဆီလေး သရုပ်ဖော်သွားပုံက လှလွန်းတော့ အကိုတော်လဲ ဘယ်လို ရေးရမယ် မသိတော့ဘူး။
ဟင်.. အစ်ကိုအောင်သာငယ်ကလည်း ရေးတာမြန်
လိုက်တာ အရိုက်မခံရဘူးလားမသိဘူး။ ဒီကတော့ ဆင်ဆာမလွတ်လို့ မရေးရင်ကောင်းမလားလို့တွေးနေ
ဒါလိုပို့စ်က မိန်းကလေးတွေ ရေးစရာမှ မဟုတ်တာ..
လူအများအပြားကို စုပြုံရက်စက်ခြင်းပေါ့.. “ပန်း”တဲ့ နန်းညီတို့တော့ ကိန်တာပဲ.. ဘယ်သကောင့်သားကို ပန်းနဲ့ တင်စားရပါ့
အင်း ဘလောဂ့်လောက အေးစက်စက်ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားမိတာ ဒီလို တက်ပိုစ့်တွေနဲ့ပဲ ပြန် နှိုးပေးရတာပေါ့။
ခက်တော့ ခက်တယ်...ရင်ထဲမှာက နှင်းဆီခင်းကြီးနဲ့ ဆိုတော့ ဘယ်အရောင် အကြောင်း ရေးရင် ကောင်းမလဲ မသိ..:P...
အီးယား အပျင်းကြီးနေတာနော်...တက်စ်ပို့ရေးရအုန်းမယ်.. ဘယ်ချစ်ချစ်အကြောင်းရေးရင် ကောင်းမလဲ
မမဝါ နဲ့အားလုံး တစုတစည်းထဲ တွေ့ရအောင် east cost မှာ ဘာဘီကျု့လုပ်ကြရင် မကောင်းဘူးလား..
ကိုရွာသား လူစုလေ...စုပြီး ရှယ် ကြမယ်..
(စီဘောက် မတွေ့လို့ ဒီမှာရေးသွားတာ စိတ်မဆိုးနဲ့ နော်)
ရွာသားလေးရဲ့ ပန်းနှင်းဆီက ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးပါ၊ သိပ်လှတယ်၊ ဆံပင်ကုတ်ဝဲနဲ့ ပန်းဖွားလွယ်အိတ်နဲ့ ဖီးဆင့်စက်ဘီးကို မြန်မြန်စီးသွားတာကို မြင်မိတယ်၊ ပန်းနှင်းဆီ အိမ်ရှေ့မှာဝဲနေတဲ့ လိပ်ပြာလေးတကောင်လည်း တွေ့ပါရဲ့။
(နောက်တခေါက်လာဖတ်တယ်၊ ယောင်္ကျားလေးအနေနဲ့ ရေးလို့ကောင်းတာပေါ့၊ ပန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ရေးရင်...အင်း ဘယ်လိုရေးရပါ့၊ ရှာကြံရေးရမှာပဲ):)
ရွာသားလေး ဒီပို့စ်မရေးခင် ၁၆ ရက်နေ့က အမကလဲ ပို့စ်တခု ရေးခဲ့တယ် လာဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ကိုအောင်သာငယ့်ဆီကနေ ရောက်လာခဲ့တာပါ.. အကိုကြီးရဲ့ ရင်ထဲက စာသားတွေ ဖတ်ရတော့ တက်ဂ်လိုက်တဲ့ ရွာသားလေးရဲ့ စာတွေ ဖတ်ဖို့ ရောက်လာတော့ ချစ်ပြုံးနှင်းဆီနဲ့ တည့်တည့်တိုးနေပါလား..ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းတာပဲ...။ ကျေးဇူးတင်တယ်ရှင်.. လူတွေအများကြီးကို တက်ဂ်ထားတာ..ဒီလိုစာမျိုးတွေ အများကြီးဖတ်ရတော့မှာမို့လို့လေ..:)
သူများ ရေးထားတာတွေ လိုက်ဖတ်မယ်။
အမှတ် ၂ ရယ် အမှတ် ၃ရယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရယ်ဆိုတာနဲ့ အောက်ကစာတွေ မဖတ်မိတော့လို့ ၂ခါပြန်ဖတ်ယူရတယ်။
ဟိုတစ်လောက Rဇာနည်ရဲ့ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းဆိုတာ "ပန်းလေးတစ်ပွင့်" ဖြစ်ရမယ်။း)
မမ၀ါ နဲ့ နန်းညီ ပြောသလိုပဲ
ကိုရွာသားရဲ့ နှင်းဆီလေးကတော့ လှလို့ပလို့
ညီမရေးထားတာတော့ သည်းခံဖတ်နော် .. :D
ကြိုပြီး ရီကွက်စ် လုပ်ပါ၏ :D
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ said...
ရေးထားတယ်ဗျာ.. ဘာမှတော့ မဆိုင်ဘူးး) စိတ်မဆိုးနဲ့နော့်
နှင်းဆီပန်းလေးကို နောက်တစ်ခေါက်လာကြည့်ရင်း ပန်းကို ကူးယူထားလိုက်တယ်။
ရေးပြီးသွားပြီ အစ်ကိုရွာသား...း))
ကြိုးစားပြီး ရေးပေးပါ့မယ်။ပြောရရင် ပန်းဆိုတာကိုယ်နဲ့ နဲနဲတော့အလှမ်းဝေးသားလား :D
ရေးပြီးပါကြောင်း။ နောက်ကျတဲ့အတွက် နောက်ကျကြေးတော့မပေးတော့ဘူး။ :)
အမုန်းတွေ အကြမ်းတွေပဲ ရေးတတ်ပါတော့တယ် ဆိုမှ။ အချစ်တွေ အနုတွေ လာရေးခိုင်းတာကိုဗျ။ အဲဒါပဲရေးတတ်တော့တယ်။ :)
ုကိုရွာသား က ၃-ကျောင်းက ၁၀ တန်းအောင်တာလား ဘယ်နှစ်ကလဲဟင်.. တစ်နှစ်တည်းများ ဖြစ်နေမလားလို့..ကျွန်မက ၉၇ အောင်တာ.. MTU က ကျောင်းပြီးပါတယ်..
အကိုရေ ရေးပြီးပြီဗျ တင်လိုက်ပြီ
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (177)
ရထားစီးကြသူများ ၂ - "ဘောက်ထော်" ဘူတာ။ အမေပြောပြသည့် မိသားစုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ ရက်တွေမှာ အလွန်အရေးပါသည့် ဘူတာလေးတခု။ အဖေနဲ့ အမေ အ်ိမ်ထောင်ကျတော့ အဖေက ဆင်းရဲလို့ချမ်းသာသည့်အ...